SomaliaReport: Markab Lagu Weeraray Badda Cumaan
Markab nooca xamuulka qaada ah oo laga leeyahay dalka Antigua iyo Barbuda,loona yaqaan MV Susan K . ayay budhcad-badeed ku sugnaa xeebaha Cumaan la beegsadeen weerar. Ilo wareedyada arimaha badda ayaana sidaa u sheegay wargayska Somalia Report.
Rakaabka markabka saarnaa oo la rumaysan yahay inay ka koobnaayeen afar Ukraaniyiin ah iyo lix Filibiin ah ayaa waxay isku soo xidheen maqaasiinka hoose, budhcad-badeedduna waxay saran yihiin markabka waxayna isku dayayaan inay gabi ahaanba la wareegaan. Sarkaal ku shaqo leh isku-dubaridka xamuulka loo diro gacanka cadan ayaa sidaa laga soo xigtay.
Markabka ayaa markii u danbaysay ku sugnaa 18.25N,57.27E. wuxuuna ka soo shiraacday magaalada Mumbai isaga oo ku sii jeeday xeebta Sudan.